मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का आज तोडिने, तीन महिनाभित्र सक्ने गरी नयाँ कार्ययोजना तयार – Medianp
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का आज तोडिने, तीन महिनाभित्र सक्ने गरी नयाँ कार्ययोजना तयार
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, माघ २२, २०७५१२:२२0
काठमाडौं, २२ माघ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का आज तोडिने भएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डले आज ठेक्का तोडिएको पत्र पठाउन लागेको हो ।
आयोजनाले इटालियन ठेकेदार कम्पनी (सिएमसी) लाई सम्पर्कमा आउन १४ दिनअघि पत्र पठाएको थियो । सो पत्रको जवाफ नआएपछि आयोजनाले आज ठेक्का तोड्न लागेको हो ।
त्यसका लागि हाल खानेपानी मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । आयोजनाले तीन महिनाभित्र मेलम्चीको काम सक्नेगरी कार्ययोजनासमेत तयार पारेको छ । कुनै एउटा पक्षले १४ दिनसम्म काम नगरेमा ठेक्का रद्दको पत्र पठाउन सकिने व्यवस्था छ ।
अब भ्याटबाहेक दुई अर्बको काम बाँकी रहेको छ । आगामी तीन महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पानी ल्याउने गरी कार्ययोजना तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ठेक्का लागेको मितिले तीन महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पानी झार्ने योजनासहित नयाँ ठेक्का लगाउने आयोजनाको तयारी छ ।
मेलम्चीको निर्णय खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ । इटालियन ठेकेदार कम्पनीले सिंगापुरमा वार्ता गर्न प्रस्ताव गरे पनि त्यसको कुनै वास्ता नेपाल सरकारले गरेको छैन । सीएमसीले आयोजना निर्माणका क्रममा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी नै छ ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको यो तस्वीरलाई बलिउड सेलिब्रेटीले गरे खुलेर तारिफ ! के छ तस्विरमा त्यस्तो?
चिप्स उद्योगमा ल्याइएको आलुको बोरा खोलेर हेर्दा कामदारको भागाभाग